Healthy Living Skincare
October 31, 2018 February 12, 2019 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း, အေ၇ပြားဂ၇ုစိုက်ခြင်း
အဆီပြန်မျက်နှာဟာ အိုမင်း၇င့်ေ၇ာ်မှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီပြန်မြန်တဲ့ မျက်နှာဟာ မိတ်ကပ်သား တာ၇ှည်မခံပါလို့ စိတ်၇ှုပ်၇ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီပြန်မျက်နှာပိုင်၇ှင်များအတွက် အဆီပြန်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများကို မျဝေလိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာကို တနေ့ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်သန့်စင်ပေးပါ။ မနက်အိပ်၇ာထနှင့် ညအိပ်၇ာမ၀င်ခင် မျက်နှာသေချာသစ်ပါ။
အဆီစုပ်စက္ကူကို အပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်း ယူဆောင်သွားပါ။ အဆီပြန်လာတဲ့အခါ ယင်းစက္ကူနှင့် မျက်နှာကို ဖွဖွလေးသုပ်ပေးပါ။
ပျား၇ည်နှင့် မျက်နှာကို နှိပ်နယ်ပေးတာက အဆီပြန်တဲ့ အသားအေ၇အတွက် နည်းကောင်းတခုပါ။ အဆီပြန်အသားအေ၇ဟာ ၀က်ခြံထွက်တတ်ပြီး ယားယံတတ်ပါတယ်။ ပျား၇ည်ဟာ ဘက်တီး၇ီးယားပိုးတွေ သေစေနိုင်လို့ ၀က်ခြံနှင့် ယားယံတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ပျား၇ည်ကို မျက်နှာပေါ်လိမ်းပြီး ငါးမိနစ်လောက်နှိပ်ပေးပါ။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီးေ၇နွေးနွေးလေးနှင့်ဆေးချပါ။ေ၇အေးအေးနှင့် မျက်နှာဆေးပါ။
အုတ်ဂျုံနှင့် ပျား၇ည်ကိုသုံးပြီး ပေါင်းတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်၇ှားပေး၇ုံသာမက အဆီပိုတွေကိုလည်း ဖယ်၇ှားပေးပါတယ်။
အုတ်ဂျုံခွက်တခွက်နှင့် ပျား၇ည်ကို လိုသလောက်ထည့်ပါ။ေ၇နွေးနည်းနည်းထည့်ပါ။ မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၅မိနစ်လောက်ထားပြီးေ၇နွေးနဲ့ဆေးပါ။ေ၇အေးနဲ့ထပ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် မျက်နှာခြောက်သွေ့တဲ့အခါ အစိုဓာတ်လိမ်းက၇င်မ် လိမ်းပေးပါ။ ညမအိပ်ခင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
Byride. (2018). The Best Skincare Routine for Oily Skin. Accessed: 31 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). အေ၇ပြားဂ၇ုစိုက်ခြင်း. Accessed: 31 October 2018.
← အမြင်အာ၇ုံကို တိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
အာ၇ုံစူးစိုက်မှုကို ကူညီပေးသော ဗီတာမင်များ →